2021 - NorSom News
Sharci cusub: Dowlada oo wax ka badashay xiliga sugitaanka baasaboorka(Jinsiyada) Norway.
Norsomnews - 31. desember 2021
Oslo: 10.000 qof oo codsatay in laga caawiyo biilka korontada.
AbdiBasid: Qiimaha nolosha aad nooshahay, kuma xirna nooca sharci ee aad Yurub ku leedahay. .
FHI: Dadka aan talaalka qaadan ayaa u badan dadka corone Awgii loo dhigay isbitaalada Norway.
Norsomnews - 22. desember 2021
Denmark iyo Sweden: Dadka Norway ka imaado, waa inay corona iska baaraan.
Daawo NorSom TV: Xogta iyo xeerarkii ugu danbeeyay ee xafiisyada xukuumadda Norway
Cilmi-nafsi: Dhibaatada maskaxeed ee laga dhaxlo ku noolaanshaha nolol sharci iyo xuquuq la´aan ah.
Norsomnews - 21. desember 2021
Sweden: Wiilkan oo xabsi iyo musaafurin lagu xukumay.
U.K: Soomaali lagu eedeeyay dilka xildhibaan oo diiday inuu ka danbeeyay falka dilka ah.
SWEDEN OO SOO SAARTAY XAYIRAADO CUSUB.
DAWLADA: Waxaan bahda waxbarashada siin doonaa 100 milyan oo kr.
Daawo: Wareysi iyo warbixinta App-ka Helseoversikt: Tusiye caafimaad oo af soomaali ku turjuman.
41% dadka corona u jiifa isbitaalada, waxey ku dhasheen dalal dibadda ah.
Norsomnews - 20. desember 2021
Dowlada: Qof walba oo ka weyn 18, waxaa ilaa February loo soo bandhigi doonaa irbad xoojin ah